Chọọchị nke World Nile - WRSP
AKWELKWỌ AKW .KWỌ
1942: Timothy Zell mụrụ na St. Louis, Missouri.
1948: Diana Moore mụrụ na Long Beach, CA.
1962 (Eprel 7): Mgbe ị gụsịrị akwụkwọ ahụ Onye obia n’ala di iche, Zell na Lance Christie "kesara mmiri" na Westminster College dị na Fulton, Missouri, wee hibe Water-Brotherhood, "Atl."
1963: Zell lụrụ Martha McCance. Di na nwunye mechara mụta nwa nwoke.
1967: Zell na nwunye ya kwagara St. Ndị otu ahụ ghọrọ ndị ụka niile nke ụwa (CAW).
1968: CAW webatara ma bido ibipụta akwụkwọ akụkọ, Green Egg.
1970 (June): CAW nyere ikike ọnọdụ 501 (c) (3) site na Relọ Ọrụ Ego.
1970 (Septemba 6): Zell na-akọ na enwere "ọhụụ nke ụwa dị ndụ" nke mechara bụrụ "The Gaea Thesis."
1974: Mgbe ha zutere ma hụ Diana Moore n'anya (Morning Glory Ravenheart) na 1973, ha abụọ lụrụ.
1976: Zell na nwunye ọhụrụ ya kwagara West Coast, na Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nwere nsogbu akụ na ụba.
1988: Zell weghachiri Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ya na Diane Darling dika onye ndezi.
1994: Zell nakweere aha "Oberon."
1996: Ebube nke ụtụtụ ghọrọ Nnukwu Onye Nchụàjà nke CAW.
1996-1997: Wolf Dean Stiles, Morning Glory, na Oberon gosipụtara dị ka atọ ma mesịa kpọọ aha Ravenheart dị ka aha ezinụlọ ha.
1996-1998: Esemokwu dị n'ime CAW dugara Zell na-enweghị ike ịchịkwa Green Egg, e wee maa ya aka dị ka Primate nke CAW. Zell weere ụbọchị izu ike dị ka onye ndu otu afọ.
1998: Zell-Ravenheart weere ụbọchị izu ike dị ka CAW Primate.
2002: Zell-Ravenheart kwadoro na CAW.
2004: Okwu ego na nke iwu mere ka agbaze CAW.
2004: Zell-Ravenheart guzobere ụlọ akwụkwọ Gray nke Wizardry.
2006: E guzobere CAW n'okpuru ndị isi Zells mgbe afọ abụọ gachara.
2007: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ E degharịrị ma maliteghachi mbipụta na usoro ịntanetị.
2010: Lance Christie, onye nchoputa nke Water-Brotherhood nwụrụ.
2014 (May 13): Ebube nke ụtụtụ Zell-Ravenheart nwụrụ.
Timothy Zell, onye mechara nweta aha Oberon Zell-Ravenheart na Otter Zell, amụrụ na Nọvemba 30, 1942 na St. Missouri. Dịka nwata, Zell gụrụ akụkọ ifo ndị Gris na akụkọ ifo, nke mere ka ọ nwee njikọ maka akụkọ ifo na anwansi. O nwekwara ahụmịhe paranormal, dịka ọhụhụ sitere na ndụ nna nna ya. Zell debanyere aha na Westminster College na Fulton, Missouri na 1961 wee lụọ na nke mbụ ya na 1963. Timothy na Martha (McCance) Zell nwere nwa nwoke n’afọ ahụ. Zell gara n'ihu inweta akara ugo mmụta mahadum ya na Westminster na 1965, debanye aha dị ka nwa akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na Mahadum Washington na St. Louis maka obere oge, wee debanye aha na Life Science College na Rolling Meadows, Illinois. Afọ abụọ ka nke ahụ gasịrị, e nyekwara ya Dọkịta nke Chi Chukwu.
Ọ bụ na Westminster ka ọ zutere wee bụrụ enyi Richard Lance Christie. Ha gụkọtara ọnụ ma bụrụ ndị Robert A. Heinlein na-akụzi akụkọ sayensị, Onye obia n’ala di iche. Dabere na ahụmịhe a, Zell na Christie “kesara mmiri” wee kpụọ otu nwanne-mmiri akpọrọ Atl , okwu Aztec maka mmiri. Nke a bụ ụlọ nke ndị enyi na ndị hụrụ n'anya ahaziri nke ọma, nke ruru ihe ruru mmadụ 100 so na ya, na -ekere ụdị mmasi ahụ dị ka “nnwale mmụta, ịmụ usoro Montessori na ọrụ nke AS Neill,” yana “'speedgụ akwụkwọ ọsọ ọsọ, ọzụzụ ebe nchekwa, karate, yoga, autosuggestion, set tiori, mgbagha, lanarị ọzụzụ na telepathy '”(Adler 1975: 291).
Uka nke Worlds nile (CAW), nke akpọrọ aha ụka nke dike a hiwere n’akwụkwọ akụkọ Heinlein, bilitere site na nwanne nwanne Atl nke e guzobere n’etiti Zell na Christie n’afọ 1967. Na ihiwe CAW, Zell si n’ụdị nwanne na-adịghị n’otu gaa usoro okpukpe. Mgbe CAW webatara n'afọ na-eso ya, ọ kọwara onwe ya dị ka Ọgha, mepee kọfị kọfị, wee bido ibipụta akwụkwọ akụkọ Neo-ndị ọgọ mmụọ, Green Egg. Na 1970, CAW guzobere ụlọ nsọ na-echekwa ma nye ya ọnọdụ 501 (c) (3) site na Relọ Ọrụ Ego. N'otu afọ ahụ Zell na-akọ na ya nwere "ọhụụ nke ụwa dị ndụ," nke edeburu na mbụ dị ka "TheaGenesis" wee mechaa "Akwụkwọ Gaea." Zell abụwo otu ụzọ kachasị dị mkpa nke ịga n'ihu na CAW mana ọ nakweere ọtụtụ aha dị iche iche ("Oberon" na 1994, aha ezinụlọ "Ravenheart" na 1996).
Site na ndu ya, Zell gara n'ihu na-eme njem n'ụwa niile, jide ọtụtụ ọrụ, na nnwale mmekọrịta na òtù. O kewapụrụ nwunye ya nke mbụ ma gbaa ya alụkwaghịm, ya na ụmụ nwanyị ndị ọzọ nwere mmekọrịta dị mkpirikpi tupu ha alụọ Diana Moore (Morning Glory Ravenheart) na nkwupụta ihu ọha ọha. Moore, onye a mụrụ na 1948 na Long Beach, gara ụka ndị Metọdist na Pentikọstal n'oge ọ bụ nwata, ma mebie ya na Iso Christianityzọ Kraịst mgbe ọ dị afọ iri na ụma. Ọ malitere ịme amoosu mgbe ọ dị afọ iri na asaa wee gbanwee aha ya na Morning Glory mgbe ọ dị afọ iri abụọ. Ọ lụrụ di na nwunye obere oge tupu ha ezute ma n'oge na-adịghị anya ọ lụrụ Zell na 1973. Di na nwunye ahụ kwadoro ogologo ndụ ha niile, ma na-emeghe mmekọahụ (polyamorous), mmekọrịta alụmdi na nwunye. N'ime mmekọrịta ndị a bụ mmalite nke atọ na Diane Darling, onye ghọrọ onye nchịkọta akụkọ nke Green Egg na 1988, yana otu atọ na Wolf Dean Stiles, nke dugara na nnabata Ravenheart dị ka aha ezinụlọ maka ndị mmekọ atọ ahụ.
CAW na Green Egg bụ ihe elebara anya nke nzukọ Zell ogologo oge, mana ha abụọ nwere nsogbu site n'akụkọ ihe mere eme nke nzukọ ha. Egg Green ahụ, nke hiwere na 1968, ego dara na 1976; Emeghachiri mbipụta a na 1988 wee kwaga na ntanetị n'ịntanetị na 2007. Esemokwu dị n'ime CAW dugara na Zell enweghị ike ịchịkwa Green Egg ma mesịa chee ihe ịma aka ihu n'ọnọdụ ya dị ka Primate nke CAW. Zell weere ụbọchị izu ike dị ka onye ndu otu afọ na 1998. Ka esemokwu ahụ gara n'ihu, Zell kwụsịrị kpamkpam na CAW na 2002. Na 2004, ndị isi oche gbasaa CAW mana ha mechara gbaa arụkwaghịm; E guzobere nzukọ ahụ na 2006 n'okpuru nduzi Zell.
Zell sonyekwara na ntọala nke ọtụtụ otu ndị ọzọ (Council of Themis, Nemeton, Holy Order of Mother Earth, Ecosophical Research Association, Universal Federation of Pagans, Gray School of Wizardry). Researchtù Na-ahụ Maka Ecosophical Research Association nyere isi iyi nke ego maka oge dị ka Zells mepụtara unicorns site na ịzụlite na ịwa ahụ na-agbanwe ewu ọcha, anọ n'ime ha bụ ndị e rere na Ringling Bros. Barnum & Bailey Circus na 1984. N'afọ sochirinụ, nzukọ ahụ, nke na-achọ "Nyochaa ókèala nke archetype, ihe ndabere nke akụkọ mgbe ochie na ókè dị n'etiti ihe dị nsọ na nke ụwa" ma bụrụ ọkachamara na crypozoology, bidoro ịchọ ndị ahịa ahịa na South Seas (Adler 1975: 317). Grey School of Wizardry, nke hibere na 2004, bụ usoro agụmakwụkwọ magickal nke edoziri n'ịntanetị.
Ọ bụ ihe dịka n’otu oge ka Oberon Zell-Ravenheart na Morning Glory-Ravenheart maliteghachiri ịchịkwa CAW n’afọ 2006 ka a chọpụtara na Morning Glory nwere ọtụtụ myeloma, na afọ abụọ ka nke ahụ gasịrị, a chọpụtara na Oberon nwere ọrịa kansa. Ebube nke ụtụtụ natara ọgwụgwọ mana ọ dabara n'ọrịa kansa na 2014 (Blumberg 2014). Oberon gbakere n'ọrịa kansa mgbe ịwachara ahụ ma ọ na-aga n'ihu na-eduga CAW. Lance Christie, onye nkwado nke mbụ Water-Brotherhood, nwụrụ na 2010.
Zell nwere mmetụta nke ọtụtụ ndị na-eche n'oge ahụ, dị ka Ayn Rand na Abraham Maslow, ndị ọrụ ha lekwasịrị anya na mkpesa megide ụdị mmegbu nke ọha mmadụ nke oge a na ọgụ maka ezigbo onwe. Agbanyeghị, usoro echiche CAW gbanyere mkpọrọgwụ na akwụkwọ akụkọ Heinlein, Onye obia n’ala di iche, e si nweta aha ya site n'akụkụ Akwụkwọ Nsọ Ọpụpụ 2:22
(Cusack 2009: 89). Ọnọdụ maka akwụkwọ akụkọ bụ Agha postwa nke Atọ United States. N'oge a, a na-eme njem sara mbara nke mbara igwe, ma na-achịkwa ọnwa. Akwụkwọ akụkọ a metụtara Valentine Michael Smith, nwa nwoke nke nne na nna astronaut, bụ onye na-enweghị nne na nna na Mars ma bụrụ ndị Martians zụlitere. Smith kwuru okwu n'asụsụ Martian, gosipụta ọgụgụ isi karịrị nke mmadụ, nwee ikike pụrụ iche nke psychokinetic, ma gosipụta mmekọahụ metụtara mmekọrịta nke ọdịnala Martian (nke onye ọ bụla bụ nwoke na nwanyị), mana ọ kpakwara agwa naïveté dị ka nwatakịrị. Dika okenye, Smith laghachitara n’uwa dika onye nzoputa nke ndi mmadu, mee ka ndi mmadu mara banyere ememe Martian, dika ndi na eketa mmiri (nke chere na Mars putara ihe di nkpa) Smith mechara guzobe ụka nke ụwa niile, nke nyere ndị ọgbakọ ya ikike mmụọ, ọkachasị ikike akwa ma ọ bụ "ghọta nke ọma na onye na-ekiri ihe na-aghọ akụkụ nke ihe a chọpụtara - iji jikọta, ịgwakọta, ịlụ di na nwunye, tufuo njirimara na ahụmịhe otu" (Heinlein 1961: 206). E kwenyere na mmadụ niile nwere ike inweta ikike Smith mgbe ha mụtara ịsụ asụsụ Martian ma tinye echiche ya. Ndị otu niile nke Church of Worlds tụrụ anya na ndị na-amụtaghị usoro Smith ga-emecha nwụọ, na-ahapụ naanị “Homo ka elu.” Ma, ndị na-eme ihe ike gburu Smith ma nakwere ọnwụ ya na-ejighị ikike psychokinetic ya gbochie ndị mwakpo ya.
Onye obia n’ala di iche kpaliri echiche nke otu dị iche iche sitere na Merry Pranksters na Kerista Commune na Manson Family. N'oge ọgba aghara 1960, mgbe ọtụtụ ndị ntorobịa na-enweghị mmasị na-awakpo ọtụtụ ụlọ ọrụ mmekọrịta ọha na eze bụ ndị juputara n'ọtụtụ ndị otu mgbagha ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mmegharị okpukpe ọhụrụ. N'ebe a ka a bịara were echiche Heinlein dị ka onye ọhụụ, Heinlein n'onwe ya bụ "onye ndu mmụọ nke mmụọ." Dị ka Cusack kwuru, “studentsmụ akwụkwọ kọleji gafee America gwara ndị nkuzi ha okwu mgbanwe ndụ gbanwere Onye mbịarambịa n’ala ọzọ ” (Cusack 2009: 83-84). Ndepụta (2009: 44) na-akọwa amamihe ime mmụọ ya dị ka onye nwere ike iwu:
… Onu ogugu nke Mezaia iji daba na usoro ihe omuma nke na-abughi ihe omuma ma nye uzo ozo bara uru nye uwa nke oge a nke na adighi adabere na ntughari aka nke chi, onye puru ime ihe nile… 'nzoputa' ka asughariri n'ime oganihu nke uwa. nke ịrụsi ọrụ ike na imesi ike na ezinụlọ na ọbụbụenyi (kama ịbụ nduzi sitere n'aka Chineke) bụ isi ihe na-akpata ịlụ ọgụ na ezighi ezi na ọdịdị mmadụ.
Otu n'ime iwu ndị bụ isi nke CAW sitere na oge na ndụ Zell nke mere na Septemba 6, 1970. Ọ kọwara ya dị ka "ọhụụ ọhụụ na ihe omimi nke gbanwere kpamkpam ndụ na ọrụ m" (Zell 2010):
Mgbe oge awa ole na ole gafere na elekere, ahụrụ m n'ahụ m, akụkọ ihe mere eme na ọmụma nke ụwa dị ndụ. Ọ bụ ahụmịhe nke imepụta onwe m na cell mbụ nke dịbu ma na-ekewa ma na-ekewa ruo mgbe m nwere mmetụta nke ọnụnọ m, site na mkpụrụ ndụ DNA, na ndụ niile na mmata nke ọnụnọ nke ndụ niile dị n'ime m. Otutu ihe omuma na ihe omuma banyere Gaea juputara na m. Enwere m mmetụta nke enweghị njikọ na ụwa ma gọzie ya. Kemgbe ahụ, Gaea biri ndụ ahapụbeghị m. Arara m onwe m nye ndị mmadụ, ebe, na otu dị iche iche, nke m, kacha gosipụta echiche Gaea na mkpa m ka m na-ahụ ya; otu biosphere, otu nje, na idi adi.
N'afọ sochirinụ Zell dere edemede nke akọwara banyere Gaea (chi nwanyị mbụ Greek nke Earth), "Theagenesis: Ọmụmụ nke Chi nwaanyị ahụ, ”bụ́ nke e mechara mechaa ghọọ“ The Gaea Thesis. ” Ọ na-egosi na "Biosphere nke entirewa niile nwere otu ihe dị ndụ" ma bụrụ ihe mejupụtara ụdị ndụ niile (Cusack 2010: 65; Adler 1975: 298). Zell (2010) mere ka mgbanwe nke Biosphere nke backwa laghachi na otu sel dị ndụ:
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri afọ anọ gara aga, ihe ndị dị ndụ n ’withwa malitere site na otu mkpụrụ ndụ dị ndụ nwere ihe mejupụtara DNA. Site na mgbe ahụ gawa, sel mbụ ahụ, nke izizi iji mepụta ikike ịmụpụta, kewaa, bunye ya ma kee nkewa ya na mbara igwe na ụmụ anụmanụ dị iche iche, tinyere onwe anyị. Otu protoplasm nke mmadu nile kesara, ugbu a mejuputara ndu nile n’uwa.
Dika onye nchoputa Atl Lance Christie weputara echiche a (2006: 121-22):
Anyị na-ahụta na usoro ijeri afọ 22 nke mgbanwe nke ndụ na ụwa nwere ike ịmata dị ka usoro mmepe nke ntozu oke nke otu nnukwu ihe dị ndụ; mbara ala ahụ n'onwe ya… Anyị na-ahụ agbụrụ mmadụ ka ọ bụrụ "mkpụrụ ndụ akwara" nke ụwa a… "ondị n'otu a na-emepụta ikike maka" ịdị n'otu telepathic nke nsụhọ n'etiti akụkụ niile nke usoro ụjọ ahụ, n'etiti mmadụ niile, na n'ikpeazụ ihe niile dị ndụ. ”
Dị ka "mkpụrụ ndụ akwara" nke Beingbụ ụwa, onye ọ bụla nwere ike mmepe onwe ya. Na, “Chi bụ ọkwa kachasị elu nke nghọta maara nke onye ọ bụla dị ndụ, na-egosipụta onwe ya na ngosipụta nke onye ahụ of. Nchikota ndi mmadu na-aputa mgbe otutu mmadu (omenala ma obu ndi mmadu) nwere oke nkwekorita, nkwenkwe na akuku nke uzo mmadu nke ha na-eche banyere chi ma obu chi nwanyi, nke na-acho agwa (na okike) nke ihe ndi ozo nke ọdịbendị ahụ ”(G'Zell nd). Ikike a ịghọta ma nwee ọmịiko kpamkpam nke na onye na-ekiri ihe na njikọ jikọrọ ọnụ na-ama jijiji, anyị niile nwekwara ikike ịzọ. Ebe ọ bụ na ihe niile groks bụ Chineke, mgbe ahụ "art bụ Chineke, na abụ m Chineke." Ihe o buru ibu bu na umu mmadu nwere njikọ chiri anya dika ihe nke zuru oke. Kama ịbụ ndị “na-achị,” dị ka ọ dị n'ọdịnala Ndị Kraịst, ụmụ mmadụ aghaghị ịnọ na-arụkọ ọrụ ọnụ n'ime ihe ahụ dị ndụ ha so na ya.
Ihe ọzọ ị na-eme maka ịkọ ndị CAW bụ mmekọahụ na-emeghe (MoonOak nd; Linde 2012). Morning Glory Zell di otutu e si na ya chepụta echiche nke polyamory na "A Bouquet of Lovers." Dị ka ọ na-akọwa mmekọrịta mmekọrịta polyamorous, "Ebumnuche nke ezigbo mmekọrịta mmekọrịta bụ ịzụlite mmekọrịta na-aga n'ihu, ogologo oge, mmekọrịta siri ike nke sitere na ọbụbụenyi miri emi miri emi." Polyamory bụ otu n'ime ngosipụta nke njikọta nke mmadụ na ngagharị iwe megide oke nkewa. Mmekọrịta mepere emepe na-akwagide site na ịkwụwa aka ọtọ, nghọta, nkwekọrịta nkwekọrịta. Ihe ndokwa ọzọ bụ na enwere mmekọrịta na-enweghị nchebe site na ịme naanị n'ime otu, nke bụ "Condom Compact" (Morning Glory Zell nd).
Nkwenye CAW na pluralism ime mmụọ, chi dị nsọ, ịdị nsọ nke okike, mmekọrịta kwekọrọ na okike na ụdị ndụ ndị ọzọ, mmetụta nke onwe onye nke ndị mmadụ niile, ọbụbụenyi miri emi, na mmeghe nke mmekọahụ na-egosipụta na mmegide ya na ụkpụrụ okpukpe ọdịnala, ọkachasị Ndị Kraịst (Zell nd):
"Monothesisism:" echiche na ọ dị ma Otu-Ezi-Ezi-na-Nanị-Way (OTROW);
Monotheism (Chineke): Chi dị ka ọ bụghị naanị otu, mana naanị ịbụ nwoke
Nanị iche: echiche nke "Ndị A Họpụtara" dị ka ndị ezi omume a họpụtara ịchị ndị ọzọ niile;
Ozi ala ọzọ, ikwusa ozi ọma, na ntụgharị;
Ifdị n’otu: na mmadụ nile kwesiri ikwere ma kpaa agwa otu;
Eluigwe na Hel dị ka ụgwọ ọrụ ebighi ebi ma ọ bụ ntaramahụhụ mgbe a nwụsịrị;
Patriarchalism: ike ndi nwanyi; ndị ụkọchukwu pụrụ nanị ịbụ ndị ikom (Ndị Nchụàjà);
Mmekọahụ na mmekọahụ “a na-akwadoghị” dị ka ihe rụrụ arụ, okwu rụrụ arụ, na “mmehie;”
Isi ihere na obi umeala ("Ha maara na ha gba ọtọ, ihere na-eme ha.")
Oglụ nanị otu nwanyị (otu nwoke na otu nwanyị) dịka nanị ụdị ịlụ di na nwunye kwere;
Banyere Nature dị ka ihe na-adịghị ndụ, "okike" nke a ga-erigbu;
"Mmehie nke mbụ" dị ka nnupụisi na nnupụisi;
“Syjụ okwukwe” ka a taa ya ahụhụ dị ka ikwenye n'ozizi ndị akpọsa;
“Alaeze Ukwu Rom dị nsọ;” ebumnuche nke alaeze ụwa nke na-achịkwa mmadụ niile.
Ọ bụ ezie na CAW na-atụ anya nnabata nke usoro uru ya, nkwenye doro anya na njikọta bụ nhọrọ onye ọ bụla. N'ezie, CAW na-ekwusi ike na ọ "nwere naanị otu ezigbo nkwenkwe - nkwenye ya na ọ nweghị nkwenye" ​​na "naanị mmehie bụ ihu abụọ… na naanị mpụ bụ 'nke na-emebi megide ibe ya'" (Adler 1975: 304, 310 ). Nanị nkwenye nke ụka bụ "Chọọchị nke ụwa niile raara nye ememe nke ndụ, iji gosipụta oke ikike mmadụ nwere na nnwere onwe nke nnwere onwe onye kachasị na ọrụ onwe ya na mmekọrịta mmekọrịta mmụọ na mmekọrịta ya na Biosphere nke Holy Mother Earth" ("Chọọchị nke Worldwa niile" nd).
Onye obia n’ala di iche bụ ihe sitere n'ike mmụọ nsọ maka ọtụtụ ememme na omume CAW, gụnyere ịkesa mmiri, mmekọrịta mmekọahụ na-emeghe na ụdị ezinụlọ ndị na-abụghị omenala, na ekele ekele (Cusack 2010: 53). Otutu emume ndi ozo na-enweta site na Wicca.
Ihe omume dị mkpa na CAW ka a na-ele ọha mmadụ anya dị ka ndị dara ogbenye. Morning Glory Zell, onye choro Choctaw ihe nketa, na-ekwupụta na enweghị ememe bara uru na omenala ndị America:
“Anyị bụ“ ụmụ mongrel bastard na ala mara mma nke na-abụghị nke anyị n'ezie. Naanị ndị nwere ezigbo ọdịnala ebe a bụ ụmụ amaala America. Enwere ọtụtụ ihe iji mata ha. Mana obughi omenaala anyi. Ọ dịghị mgbe anyị na-abụ abụ ma na-ama jijiji n'ime ebe anyị na-amụ ihe wee gwa anyị ụda na ụda. A zụlitere ọtụtụ n'ime anyị na simenti na nchara, wepụrụ kpamkpam oge ndị gbara anyị gburugburu… offọdụ n'ime anyị nwere otu ụdị ụda dị ka ụmụ amaala, mana anyị enweghị ọdịnala. Anyị bi n'ọdịbendị dara ogbenye "(Adler 1975: 312).
A na-enwe nzukọ akwu na ofufe ofufe dị ka ụlọ nke mmiri mmiri ọ bụlagodi kwa ọnwa. Isi emume a na-efe n’ofufe bụ iketa oke mmiri. Ekele a na-eme, "Ka akpịrị ghara ịkpọ gị nkụ," na-egosi ịdị nsọ nke mmiri n'ime CAW, nke na-enweta site na mkpa mmiri dị na mbara ala Mars na-ekpo ọkụ, na nghọta nke ndụ sitere na mmiri-gburugburu ebe obibi bụ isi iyi nke ndụ.
Nzute Zell na ndị ọgọ mmụọ, dịka Feraferia, dugara ka CAW nakweere emume Wiccan, dịka ụbọchị nsọ asatọ. nke a na-akpọkarị “Wheel of the Year.” Ndị a gụnyere ụbọchị nke solstices na equinoxes na obe nkeji iri na ise ụbọchị. Ọtụtụ ndị otu na-eme ememme ọnwa na ọnwa ọhụụ kwa ọnwa. Waterkin na-ekwenyekarị na nchọpụta emume nke "Wheel of the Year" na usoro nke Ọnwa nwere ike iweta mmekọrịta na Chineke site na ntinye nke ndụ mmadụ na ịme ihe na ngbanwe nke Nature. Oge mgbanwe, nbili na ọchịchịrị nke ọchịchịrị na ìhè, ka aghọtara dịka ngosipụta nke usoro ndụ nke Chi dị iche iche nke gụnyere ọmụmụ, ịhụnanya, ọnwụ na nlọghachi. CAW na-ebido ntinye aka, ntinye aka, nyocha ọhụụ, mgbagha na agụmakwụkwọ nke ụdị dị iche iche.
CAW na-akọwa ozi ya dị ka “ịgbalite netwọkụ nke ozi, akụkọ ọdịnala na ahụmịhe iji teta Chineke n'ime ma nyekwa okwu na mkpali maka ịmaliteghachi Gaea na ijikọta ụmụ ya site na agbụrụ agbụrụ raara nye ọrụ nlekọta na mgbanwe nke nsụhọ" (Zell nd). Nchịkọta niile nke CAW nwere Primate (Timothy Zell), ndị ụkọchukwu a họpụtara ahọpụta na ndị isi oche, nke na-ahụ maka azụmaahịa na usoro nhazi. Isi ụlọ ọrụ CAW dị na Cotati, California. Ebe nsọ CAW dị na California, Annfn, nwere ụlọ nsọ okpukpu abụọ, ụlọ, ogige / ubi mkpụrụ osisi nke dị na acre iri ise na ise.
A na-ahazi ndị otu CAW (mmiri mmiri), nke mejupụtara "ebo" (Council of the Whole or Curia) dị ka "Mgbaaka" atọ. onye ọ bụla n’ime ha nwere Circle concentric atọ. A kọwara Mgbaaka dị ka "ụzọ nnabata na-eduga n'ime , gaa na nsụhọ nke Chi nwanyị / Chineke N'ime, nwere nzube atọ nke a) ime onwe ya, b) njikọ / itinye aka na agbụrụ na c) ọrụ "(Maureen nd;" The Church of All Worlds nd).
Akpa Mgbaaka (Ndị Na-achọ): Ndị so na Curia mana ha enyeghị nkwado CAW nkwado ego ma nwee ọzụzụ dị oke.
Mgbaaka nke Abụọ (Scion Council): Na-arụsi ọrụ ike, na-akwado ndị otu a kọwara dịka "ahụ na ọkpụkpụ nke CAW" ma jee ozi dị ka ndị isi ọgbakọ.
Uzo nke ato (Nzukọ nke Beacon): Ndị otu CAW nwere ahụmịhe na ndị maara ihe, ndị bụkwa ndị ụkọchukwu na ndị ụkọchukwu, na-etolite ahụ ndụmọdụ.
Iji banye n'ime n'ime usoro mgbanaka, ndị otu ga-enwerịrị ihe ọmụma site n'ịgụ akwụkwọ ndị ahọpụtara, na-ekere òkè na mmụọ ma zute ọzụzụ otu na ide akwụkwọ. A na-akpọ mpaghara, nke nwere nnukwu ọgbakọ ọgbakọ nke CAW "Nests." Guzobe akwụ akwụ chọrọ ma ọ dịkarịa ala mmadụ atọ. A na-ekekọta nests ka ha bụrụ alaka na mpaghara mpaghara. Fọdụ, ma ọbụghị ihe niile, Nests bụ obodo. Nests na-eje ozi dị ka ebe obibi maka mmụta na omume nke ụkpụrụ ụka, na ebumnuche nke ime ka njikọ dị na Chi na mmebe onwe onye site n'aka ndị otu. Ndị otu na-agbanwe agbanwe site n'akụkọ ihe mere eme CAW nyere ngbanwe nhazi ya na ọgba aghara nke obodo. Ndị otu dị elu rue ọtụtụ narị n'oge 1990s. Atụmatụ na nso nso a na-akọwa ndị otu mba dị ka "obere na njedebe na United States, Australia na akụkụ Europe gụnyere Germany, Switzerland na Austria" (Cusack 2010: 80).
CAW emeela obere esemokwu mpụga. Ebu ụzọ gọnahụ otu a ka akwụ ụgwọ ụtụ isi, mana na 1971 ghọrọ onye mbụ neo-Pagan nke enyere ọkwa ahụ. Ihe ịma aka kachasị na-eche ụka ihu bụ nke obodo. Onye ndu adabaghị adaba. N'ime otu oge ndị Zells kwagara n'ime nzuzo zuru oke ruo ọtụtụ afọ; n'oge ọzọ Oberon Zell gbapụrụ dị ka Primate, na CAW gbazere n'ezie ruo ọtụtụ afọ. CAW na-echekarị ụta ego site n'akụkọ ihe mere eme ya. Dị ka ihe atụ, Zell mepụtara ụfọdụ ego site na ọrịre nke ndị unicorns yana statuary na onyonyo. Otú ọ dị, n'ọtụtụ akụkụ, ndị Zells ji ụdị ọrụ dị iche iche kwado onwe ha. Enweghi ike ịkwado mbipụta nke Green Egg mejupụtara nsogbu nhazi site na imetụta nkwukọrịta dị n'ime na mmasị nke ndị otu ọhụrụ.
CAW lanarị nsogbu nhazi ya ma nwee ọhụụ ọzọ na afọ ndị na-adịbeghị anya, Mbilite n'ọnwụ nke atọ nke Phoenix (Zell Ravenheart 2006). Ihe ịma aka dị ịrịba ama karị na CAW nwere ike ịbụ onye ndu ya n'ọdịnihu. Morning Glory Zell na Lance Christie anwụọla. Oberon Zell lanarịrị ọrịa kansa nke eriri afọ na-egosi na ọ nwetaghachiri ahụike ya. Agbanyeghị, Zell bụ ihu nke CAW ruo ọtụtụ iri afọ. Etu esi ahazi nzukọ a ga-egbo mkpa ya ka ọ gafere.
Adler, Margot. 1979. "Okpukpe si Ọdịnihu - Chọọchị nke Worldwa Nile." Pp. 283-318 na Ịdakwasị Ọnwa: Ndị Witches, Druids, Ndị Na-efe Chineke, na Ndị Na-eme Ihe Ọjọọ Ndị Ọzọ na America Taa. Boston: Beacon Press.
Christie, Nwoke. 2006. “Neo-Paganism: Eziokwu ozo. Pp. 120-21 na Omelette Green Egg: Ihe omuma nke nka na edemede site na akwukwo akwukwo ndi ozo, nke Oberon Zell-Ravenheart dere. Franklin Lakes, NJ: Akwụkwọ Ọhụrụ.
Cusack, Carole M. 2010. “Chọọchị nke ụwa niile: akụkọ ifo sayensị, gburugburu ebe obibi na ọhụụ ọhụụ zuru oke.” Okpukpe ndị mepụtara: ichetụ n'echiche, akụkọ ifo na okwukwe. Surrey, England: Ashgate.
Cusack, Carole. 2009. “Akwụkwọ akụkọ sayensị dịka Akwụkwọ Nsọ: Robert A. Heinlein's Onye obia n’ala di iche na Chọọchị nke Worldwa Nile. ” Akwụkwọ & Aesthetics 19: 72-91.
G'Zell, Otter. nd “THEAGENESIS: Ọmụmụ nke Chi nwanyị.” Nweta site na http://caw.org/content/?q=theagenesis na 20 July 2015.
Heinlein, Robert A. 1961. Onye obia n’ala di iche. New York: Berkley.
Linde, Nels. 2012. "Ndị ọgọ mmụọ na Poly - Di na Nwunye Poly, na Ndị Enyi - Usoro Ajụjụ Ọnụ."
Nweta site na http://pncminnesota.com/2012/01/10/pagan-and-poly-a-poly-couple-and-friends-an-interview-series/ na 20 July 2015.
Ndepụta, Julia. 2009. “‘ Kpọọ Mme Protestant ’”: Liberal Christianity, Individualism, na Mezaịa in Onye obia n’ala di iche, akwa, na Onye nwe ìhè. Mmụta akụkọ sayensị. Nweta site na http://www.depauw.edu/sfs/backissues/107/list107.htm na 20 July 2015.
Maureen, Mama. nd “CaW Mgbaaka.” Nweta site na http://caw.org/content/?q=cawrings na 20 July 2015.
MoonOak, Mkpu Luke. nd “Polyamory na CAW: A Heuristic Literature Review.” Nweta site na http://caw.org/content/?q=polyincaw na 20 July 2015.
"Chọọchị nke Worlds, Akụkọ Nkọwa Dị Mkpirikpi." nd Nweta site na http://www.sacred-texts.com/bos/bos572.htm na 20 July 2015.
Zell, Ebube ningtụtụ. nd “A Bouquet of Lovers: Strategies for Responsible Open Mmekọrịta.” Nweta site na http://caw.org/content/?q=bouquet na 20 July 2015.
Zell, Ebube nke Ututu. Na “Condom Kọmpat.” Nweta site na http://caw.org/content/?q=condom na 20 July 2015.
Zell, Oberon. 2010. "GaeaGenesis: Ndụ na Ọmụmụ nke Livingwa Dị Ndụ." Nweta site na
http://www.patheos.com/Resources/Additional-Resources/GaeaGenesis-Life-and-Birth-of-the-Living-Earth.html?showAll=1 na 20 July 2015.
Zell, Oberon. nd “Ihe Neo-Pagan Legacy.” Nweta site na http://caw.org/content/?q=legacy na 20 July 2015.
Zell Ravenheart, Oberon. 2006. " Nkwupụta Oberon na Waterkin: 3rd Phoenix Mbilite n'ọnwụ nke CAW, "February 21. Nweta site na http://caw.org/content/?q=waterkinltr na 20 July 2015.
URLỌ NKE OFWA NILE Njikọ vidiyo